महिला लघुवित्तको आईपीओ बिक्री खुल्ला, कति दिने आवेदन ? - CNN EXPRESS
महिला लघुवित्तको आईपीओ बिक्री खुल्ला, कति दिने आवेदन ?
माघ ३०, काठमाडौं । महिला लघुवित्त वित्तीय संस्थाले आज, माघ ३० गते (शुक्रबार) देखि सर्वसाधारणलाई प्राथमिक शेयर (आईपीओ) निष्काशनमा ल्याएको छ। लघुवित्तले जारी पूँजीको ४० प्रतिशतले हुन आउने ४ करोड रुपैयाँ बराबरको ४ लाख कित्ता शेयर निष्काशनमा ल्याएको हो।
त्यसमध्ये ०.५ प्रतिशत आर्थत ५ हजार कित्ता शेयर कर्मचारीहरु र ५ प्रतिशत अर्थात २० हजार कित्ता शेयर सामुहिक लगानी कोषका लागि सुरक्षित गरी गरीएको छ । बाँकि ३ लाख ७५ हजार कित्ता शेयरमा सर्वसाधारणका लागि खुल्ला गरीएको हो ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति प्राप्त आश्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र मेरोशेयरको वेब तथा एप मार्फत पनि कम्पनीको आईपीओमा आवेदन दिन सकिनेछ। पछिल्लो समय आईपीओमा आवेदन दिनेको संख्या उच्च देखिएको ले यस संस्थाको आईपीओ पनि १० कित्ता शेयरको लागि आवेदन गरे पुग्ने देखिन्छ। लघुवित्तको आईपीओमा माघ ३० गतेदेखि फागुन ५ गतेसम्ममा आवेदन दिन सकिनेछ।
सर्वसाधारणलाई ४ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ निष्काशनपछि लघुवित्तको चुक्ता पूँजी १० करोड रुपैयाँ पुग्नेछ। लघुवित्तको धितोपत्र निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबिआई मर्चेण्ट बैकिङ्ग लिमिटेड रहेको छ भने प्रत्याभुतकर्ता प्रभु क्यापिटल रहेको छ।
Previous: बार्न्स्लेलाई हराउँदै चेल्सी एफए कपको क्वाटरफाइनलमा
Next: पछिल्लो २४ घण्टामा थप १२७ कोरोना संक्रमित, २ जनाको मृत्यु